kenya oo awoodi weysay in ay ciidamadeeda la socdaan dhaq dhaqaaq waliba oo ay sameynayaa Al-Shabaab | Wardoon Wardoon.net - Somali News
kenya oo awoodi weysay in ay ciidamadeeda la socdaan dhaq dhaqaaq waliba oo ay sameynayaa Al-Shabaab
Wakaaladda wararka u fidisa dowladda faransiiska oo soo xiganeyso mas’uuliyiin katirsan sirdoonka reer galbeed ayaa waxa ay baahisay in aysan dowladda Kenya xiligaani awood buuxda u laheyn in ay wax ka qabato Al-Shabaabka kusii kordhaya gobolada waqooyi bari ee dalkaasi.
Sirdoonka waxa ay sheegeen in gudaha Kenya ay kusoo badanayaan xubnaha ku biiraya Xarakada Al-Shabaab iyagoona waliba ka howl galaya goboladaasi.
“dowladda kenya waxa ay awoodi weysay in ay ciidamadeeda la socdaan dhaq dhaqaaq waliba oo ay sameynayaa Al-Shabaab, waxaan aragnay muuqaalo ka hadlaya gobolka waqooyi bari ee Kenya kaasi oo ay ka dhex muuqdaan xubno katirsan Arga-gixisa oo ka hadlaya goobaha ay bulshada isugu yimaadaan” sidaasine waxaa yiri mas’uul katirsan sirdoonka reer galbeedka oo la hadlay wakaaladda wararka faransiiska ee AFP.
Dhawaan wadanka Kenya gaar ahaan Gobolka waqooyi bari waxaa masaajido ku yaala ka hadlay xubno katirsan Al-Shabaab iyagoona dadkii ku tuganaye masaajidaasi ugu digay la shaqeynta dowladda Kenya.
Wixii xiligaasi ka dambeeyey dowladda Kenya waxa ay waday duqeymo ay ka geysaneyso deegaanada Kenya ee Soomaaliya soo xiga iyadoona arintaasi u sababeeneysay in ay ku bartilmaameedsaneyso xarumo ay ku sugan yihiin Dhaq-dhaqaaqa Al-Shabaab.